Franchises ego maka ahia | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Franchises ego
Aha njikwa ego njikwa ego ego ya
Franchises Financial kacha ọhụrụ
Site na mmụba nke ndị mmadụ na-eme azụmahịa nke ha, enweela mmụba maka ọrụ ego dị ka mbelata ọnụego, mgbazinye ego na ọrụ ndekọ ego. Site n'inwekwu mkpa maka ọrụ ndị a nwere ike igosi na ugbu a nwere ike ịbụ oge itinye ego na ntanetị ego.
Kedụ ụdị ego njikwa ego enwere?
Dịka edepụtara n’elu enwere ọtụtụ nhọrọ dịgasị iche iche na ngalaba ọrụ ego niile dịka ọrụ mgbazinye ego dịka ọmụmaatụ anyị na-enye ọtụtụ franchises dị iche iche n'akụkụ ngalaba ndị a niile na ngalaba aha njikwa ego anyị. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ohere ọ bụla na mpaghara akụ ụwa niile ma ejighị n'aka maka ụlọ ọrụ ị ga - achọ isonye na m na - atụ aro ka ị gụọ site na ndekọ anyị.
Statistics gburugburu mpaghara azụmaahịa.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ a ga-egosi mmadụ ole na-azụ ahịa na-abịa ma na-azụkwa azụmaahịa nke aka ha ụbọchị ụwa niile. Ọzọkwa nke a ga - eme ka ị nwetakwuo nghọta maka ụdị ahịa ị nwere ka itinye ego na njikwa ego. N'ihi na a ga-enwekwa mkpa na ọrụ ego maka ndị ọchụnta ego n'ọdịnihu.
Enwere ndị ọchụnta ego nde 582 n'ụwa.
Na Brazil 53% ndị ọchụnta ego na-eji aka ha arụ ọrụ.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị ọrụ aka onwe ha (19.6%) na-arụ ọrụ na owuwu / usoro azụmaahịa.
83.1% ndị nwe azụmaahịa US bidoro ụlọ ọrụ ha.
22.5% nke obere azụmaahịa na-ada na afọ mbụ.
Gịnị ka ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka mpaghara ọrụ ego?
Na mkpokọta ọnụ ọgụgụ ndị a, egosiri na nnukwu ndị ahịa na-egosikwa na ọ na-egosi na ọtụtụ ndị mmadụ na-agbazị azụmaahịa niile nke pụtara na ha nwere ike chọọ enyemaka ọzọ nke ọrụ dịka ịchekwaa ego ma ọ bụ mgbazinye ego n'ọdịnihu. Na mmechi, stats ndị a na-egosi nnukwu ahịa ndị ahịa na ụwa na-agbasawanye ohere ọ bụla ebe ugbu a ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ onwe ha ma na-anwa ịchụ ahịa nke ha.
Mmechi gburugburu ụlọ ọrụ ego.
Okachasi ndi mmadu na aru oru nke aka ha na egosiputa otutu ihe ma na atughari uzo anyi si aru oru ma na eme ihe na ugbua. Mana nke a pụtara na ọtụtụ mmadụ ga na-achọ ọrụ ego dị ka mbelata ọnụ ma ọ bụ ihe ndekọ ego iji nyere aka na azụmahịa ha na-aga n'ihu. Ya mere na mmechi na m ga-ekwu na ụlọ ọrụ ọrụ ego bụ usoro azụmaahịa na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na a na-agba ya nke ọma ma na-egosi ezi akara nke ịba ụba maka afọ ndị na-abịa.